टिमले नै नरुचाएका मलनले आफूलाई साबित गर्दै जितेको समर्थन – Talking Sports
टिमले नै नरुचाएका मलनले आफूलाई साबित गर्दै जितेको समर्थन
स्थिति डाविड मलनको कथित गल्तिहरु उदाँगो पार्नका लागि नै बनेका थिए । सुस्त हुने अपेक्षा गरिएको न्युल्याण्ड्सको पिचमा इङ्गल्याण्डले १ सय ९२ रनको पहाज जस्तो योगफल पछ्याइरहदा चार ओभरमा एक विकेट गुमाउदै मात्र २५ रन बनाएको थियो ।
यो एउटा यस्तो अवसर हुने थियो जहाँ मलन इनिङ्गसको शुरुवातमा निकै सुस्त गतिमा रन बनाउने आफ्नो रोजाइको शिकार हुन सक्थे । र ट्वान्टी ट्वान्टी अन्तर्राष्ट्रियमा उनले समातेको गतिले ब्रेक लिन सक्थ्यो ।
तर मलनले आउने बित्तिकै आफ्नो पहिलो बललाई स्कायर लेगमा पुल गरे, दोश्रोलाई थर्ड म्यान बाउन्डरी कटाए र तेश्रो बललाई फाइन लेगमाथि छक्का प्रहार गरे । इङ्गल्याण्डको ट्वान्टी ट्वान्टीमा सुस्त शुरुवात गर्ने गरेका कारण कुख्यात बनेका मलन तीन बलमै १४ रनमा पुगे ।
मलनको अबको परिक्षा दक्षिण अफ्रिकाका बाया हाते रिस्ट स्पिनर तबरेज साम्सीबिरुद्ध थियो । यसअघि साम्सीले आफूलाई फ्याकेको १४ बलमा मलन एक पटक आउट भएका थिए भने १२ रन मात्र बनाउन सकेका थिए । साम्सीको स्टक बल बाया हाते ब्याट्स्म्यानबाट टाढिदै अफ स्टम्पतर्फ मोडिने भएकाले दक्षिण अफ्रिकी कप्तान क्वेन्टिन डि ककका लागि उनी स्पष्ट प्रयोग थिए । साम्सीको आगमनले घरेलु टोलीलाई खेलमा फर्काउने अपेक्षा गरिएको थियो ।
तर साम्सीको पहिलो बलमै मलनले रिभर्स स्विप गर्दै चौका प्रहार गरे । दोश्रो ओभरमा स्विप गर्दै अर्को चौका प्राहर गरे भने तेश्रोमा दुई छक्का नै हिर्काइदिए । चौथो ओभर मलनका लागि सबैभन्दा उत्कृष्ट रह्यो । उनले साम्सीलाई १६ रन प्रहार गरिदिए । मङ्गलवार सामना गरेका १४ बलमा मलनले साम्सीलबाट मात्रै ३८ रन जोडे ।
कुनै पनि ब्याट्स्म्यान कति फर्ममा छन् भनेर मापन गर्नका लागि उनको कभर ड्राइभर निकै नै उत्पादक हुन आवश्यक छ । मलनले प्रहार गरेको ९९ मध्ये ३० रन कभर र एक्स्ट्रा कभरबाटै आएको थियो र त्यो मध्ये २० रन आखा लाई नै आनन्द आउने बाउन्डरीबाट नै ।
मलनले यस्तो इनिङ्गस खेलेका छन् जसले गर्दा उनले आफुले प्राप्त गरेको स्थानमाथि बाकी रहेका शंका उपशंकालाई नै समाप्त पारिदिएको छ । शुरुवात मात्र भएको उनको ट्वान्टी ट्वान्टी अन्तर्राष्ट्रिय करिअरमा जति सफलता उनले प्राप्त गरेपनि टोलीमा उनको स्थान हातबाट फुस्कदै जाने धेरैले अनुमान गर्ने गरेका छन् ।
एकदिवसीयमा बढी जोड दिएका कारण इङ्गल्याण्डले ट्वान्टी ट्वान्टी अन्तर्राष्ट्रियमा बिरलै पूर्ण शक्तिको ११ सदस्यीय टोली खेलाउने हुँदा राष्ट्रिय टोलीको संरचनामा उनको अस्तित्व कस्तो हुने नै भन्न कठिन छ, शायद अब थियो ।
२०१९ को शुरुवातमा पाँच इनिङ्गसमा चार अद्र्धशतक प्रहार गरिसकेका मलन ट्वान्टी ट्वान्टी अन्तर्राष्ट्रिय मार्फत आफूलाई साबित गर्न उनी क्यारेबियनको भ्रमणमा निस्किए । तर उनले एक खेल पनि खेलेनन् । पछि त्यही बर्ष इङ्गल्याण्डको ट्वान्टी ट्वान्टी अन्तर्राष्ट्रिय इतिहासमा शतक प्रहार गर्ने दोश्रो ब्याट्स्म्यान बनिसकेपछि उनलाई आफ्नो कप्तानले आफ्नो औषत बढाउनका लागि इनिङ्गसको अन्तिम बलमा बाइ रनका लागि नकुदेको भन्दै आलोचना समेत गरेका थिए ।
यसै बर्ष उनले स्काई स्पोर्ट्समा लेखिएको एक कोलममा उनले भनेका छन्ः “मलाई थाहा छैन म जस्तो उल्लेख्य रन संख्या भएको ब्यक्ति कसरी दवाबमा आउछ ।” दक्षिण अफ्रिकामा भएको तीन म्याचको ट्वान्टी ट्वान्टी श्रंखलामा दिइएको एक मात्र अवसरमा आफ्नो पोजिसन बाहिर रहदै चौथो नम्बरमा ब्याटिङ्ग गर्नु अघि उनले त्यो कोलम लेखेका थिए ।
२०२० को सिजनको शुरुवातमा बिश्व नम्बर एक ट्वान्टी ट्वान्टी अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी बनेपनि मलन सुस्त शुरुवातका कारण आलोचित हुदै आएका थिए । आगामी बर्ष भारतमा ट्वान्टी ट्वान्टी बिश्वकप हुने हुदा जो रुटलाई स्थान बनाउन दक्षिण अफ्रिकाबिरुद्ध उनी नहुन पनि सक्ने धेरैले आंकलन गर्दै थिए ।
तर मङ्गलवार केपटाउनमा उनले देखाएको जादुले मलन इङ्गल्याण्डको ट्वान्टी ट्वान्टी अन्तर्राष्ट्रिय टोलीको प्रमुख हिस्सा बनिसकेकोमा अब कुनै शंका नरहेको स्पष्ट छ । १९ इनिङ्गसमा एक शतक र ९ अद्र्धशतक बनाईसकेका मलनको औषत ५० भन्दा माथि रहेको छ भने स्ट्राइक रेट १ सय ५० वरिपरि छ । कुनै बाहिरि ब्यक्ति जसरी एक समय आफ्नै खेलाडी साथीहरुले सराहना नगरेका मलनले अहिले उनीहरुको पूर्ण समर्थन पाउन थालेका छन् ।
च्यम्पियन्स लिग:पिएसजीको समना गर्दै म्यानचेस्टर युनाइटेड
अष्ट्रेलियाबिरुद्ध भारतको सान्त्वना जित, म्याक्सवेलको विकेटले खेल बदलियो
नेपालको घातक बलिङ्ग सामु मलेसिया नीरिह
लेस्टर सिटी ५२ बर्षपछि एफए कपको फाइनलमा
एक दशकमा पहिलो पटक एटलान्टासँग हार्दा युभेन्टसको च्याम्पियन्स लिग यात्रा समेत कठिन
ईंग्लिश प्रिमियर लिग क्लब टोटनह्याम हट्स्परले आफ्नो मुख्य प्रशिक्षकको भूमिकामा रहेका पोर्चुगिज होजे मोउरिन्होलाई बर्खात गरेको छ ।
मोउरिन्हो १७ महिना टोटनह्यामको डगआउट सम्हाल्दै बहिरिएका हुन् । टोटनह्याम हाल प्रिमियर लिगमा सातौँ स्थानमा रहेको छ भने युरोपा लिगबाट बहिरिसकेको छ ।
टोटनह्यामले २५ अप्रिलमा भने म्यानचेस्टर सिटीसँग कराबाओ कपमा खेल्दै छ । मोउरिन्होसँगै उनका सहायक प्रशिक्षकहरु जोओ स्याक्रमेन्टो, नुनो सान्तोस, कार्लोस ललितिन र जियोभन्नी सेरालाई पनि टोटनह्यामले बर्खास्त गरेको छ ।
“मोउरिन्हो निकै व्यवसाहिक प्रशिक्षक हुन् र उनले महामारीको बेला टोलीलाई दिएको साथको म सधैं कदर गर्ने छु।”टोटनह्यामका अध्यक्ष डानियल लेभले भने ।
मोउरिन्होले आफ्नो अन्तिम खेलमा एवर्टनसँग २-२ को बराबरी खेलेको थियो । मोउरिन्हो यस अघि पनि प्रिमियर लिग क्लब चेल्सी र म्यानचेस्टर युनाइटेडबाट बर्खास्तीमा परिसकेका थिए ।
बर्खास्ती सँ गाई टोटनह्यामले मोउरिन्होलाई ३० मिलियन पाउण्ड क्षतिपुर्ती तिर्ने छ ।
कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले एक पटक फेरि उत्कृष्ट शुरुवात दिलाएपछि नेपालले त्रिदेशीय ट्वान्टी अन्तर्राष्ट्रिय श्रृंखलामा अर्को बिशाल जित हात पारेको छ । नेदरल्याण्ड्सलाई पहिलो खेलमा ९ विकेटले पराजित गरेको नेपालले सोमबार मलेसियालाई ९ विकेटले हरायो ।
त्रिवि मैदानमा टस जित्दै पहिलो फिल्डिङ्ग रोजेपछि नेपालले मलेसियालाई घातक बलिङ्ग गर्दै १६ दशमलव ५ ओभरमा १ सय ९ रनै समेट्यो । जवाफमा कुशलले किर्तिमान कायम गर्दै लगातार दोश्रो अद्र्धशतक बनाउनुका साथै आशिफसँग अर्को शतकीय साझेदारी गरेपछि नेपालले १२ दशमलव एक ओभरमै लक्ष्य प्राप्त गर्यो ।
कुशल नेपालको लागि ट्वान्टी ट्वान्टी अन्तर्राष्ट्रियमा लगातार दोश्रो अद्र्धशतक प्रहार गर्ने पहिलो ब्याट्स्मयान बने । यसअघि नेदरल्याण्ड्सबिरुद्ध पनि अद्र्धशतक प्रहार गरेका कुशलले आसिफसँग ११ ओभरमै १ सय २ रनको साझेदारी गरेका थिए ।
नेपाल जितबाट मात्र ८ रन टाढा रहेको अवस्थामा आसिफ बिरनदिप सिँहको बलमा शर्ट थर्ड म्यानमा आउट भएका थिए । उनले २९ बलमा चार चौका र एक छक्काको मद्दतमा ४२ रन बनाए ।
आफ्नो इनिङ्गसको शुरुवात नै स्पिनर पवनदिप सिँहलाई छक्का प्रहार गरेका कुशलले ठूला शट खेल्दै मलेसियालाई पूर्ण रुपले दवाबमा राखेका थिए । उनले सैयद अजिजलाई एकै ओभरमा लगातार दुई छक्का र एक चौका प्रहार गर्दै १९ रन बटुलेका थिए ।
कुशलले ४१ बलमा पाँच छक्का र तीन चौका प्रहार गर्दै ६१ रन बनाए । बिजयी चौका दिपेन्द्र सिँह ऐरिले हिर्काएका थिए ।
करण केसीले तीन विकेट लिनुका साथै एक रनआउटमा पनि संलग्न रहेपनि नेपालले त्रिदेशीय ट्वान्टी ट्वान्टी अन्तर्राष्ट्रिय श्रृंखलामा आफ्नो दोश्रो खेलमा मलेसियालाई १ सय १० रनको झिनो योगफलमै समेटेको छ ।
त्रिवि क्रिकेट मैदानमा आक्रमक ब्याटिङ्ग गरेपनि मलेसिया थोरैमा समेटिएको थियो । टप अर्डरबाट सैयद अजिजले रन जोडेपनि मलेसिायले निरन्तर विकेट गुमाएको थियो ।
तिब्र गतिका बलर सोमपाल कामीले मलेसियाका प्रमुख ब्याट्स्म्यान बिरनदिप सिँहलाई ६ रनमा बोल्ड गरेपछि नेपाल पूर्ण रुपमा मलेसियामाथि हावी भएको थियो । दिपेन्द्र सिँह ऐरिले अजिजलाई शर्ट मिड विकेटमा आसिफ शेखको हातबाट क्याच आउट गराएपछि मलेसियाले ५१ रनमा चार विकेट लिएको थियो ।
निकै नै उत्कृष्ट फास्ट बलिङ्गको नमुना प्रस्तुत गरेका करणले ओपनर अनवर अरुद्दिन, शर्भिन मुनियन्डी र स्याजरुल इद्रुसको विकेट लिएका थिउ । मुनियन्डीले १५ बलमा एक छक्काको मद्दतमा २० रन बनाए । अजिजले सर्वाधिक २४ बलमा २७ रन बनाए । उनको इनिङ्गसमा चार चौका र एक छक्का प्रहार गरेका थिए ।
करणले तीन ओभरमा १७ रन खर्चिएका थिए । सन्दिप लामिछानेले ३ दशमलव ५ ओभरमा २५ रन खर्चदै दुई विकेट लिए । शाहब आलम र कुल मल्लले पनि नेपालका लागि १–१ विकेट लिएका थिए ।
त्रिवि क्रिकेट मैदानमा आक्रमक ब्याटिङ्ग गरेपनि मलेसिया १६ दशमलव ५ ओभरमा अल आउट हुदै १ सय ९ रनमै समेटियो । टप अर्डरबाट सैयद अजिजले आक्रमक ब्याटिङ्ग गरेपनि मलेसिायले निरन्तर विकेट गुमाएको थियो ।
रियल गेटाफेसँग रोकिँदा एट्लेटिकोले लियो तीन अंकको अग्रता
युरोपियन सुपर लिग: यो भनेको के हो ? के यसले पुर्णता पाउला ?
दिल्लीबिरुद्ध १ सय ९५ रन पनि डिफेण्ड गर्न असफल पञ्जाब